दश तस्विरमा हेर्नुहोस्, पेरिस डाँडामा प्रचण्डले यसरी सम्झिए सहिदलाई | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
फागुन ३० गते, २०७५ - १६:१५
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विप्लव समूहलाई नक्कल, षड्यन्त्र तथा नाटक गरेर परीक्षामा पास नहुने बताएका छन् ।
वाइसिएल नेपालले पेरिसडाँडामा आज आयोजना गरेको ‘शहीद तथा बेपत्ता परिवार अभिनन्दन’ कार्यक्रममा उनले भने, “कुनै पनि आन्दोलनलाई सफल बनाउन त्यो समय, अवस्था तथा आवश्यकताअनुसारको सक्कलताबाट मात्रै सफल हुन्छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लवलाई सङ्केत गर्दै कसैको नक्कल गर्दै धाँकधम्की दिँदै आफ्नो अधिपत्य देखाउँछु भन्ने कसैलाई सपना नदेख्न चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले विप्लवलाई लक्षित गर्दै भने, “निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्छ, निरङ्कुशतामा लान सकिँदैन ।” उहाँले देशमा शान्ति, अमनचयनलाई बिथोल्न खोजे जो कोहीलाई राज्यले संविधान तथा ऐन कानूनअनुसार कारवाही गर्छ, त्यसैले परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरणको अन्तिम रुपमा केही दिनमा नै हुनेसमेत जानकारी गराए ।
फागुन ३० गते, २०७५ - १६:१५ मा प्रकाशित
हामीले तिरेको करको सम्मान गर, हिलो धुलो मुक्त सडकमा गुड्न देऊ
काठमाडौं । हामीले तिरेको करको सम्मान गर, हिलो धुलो मुक्त सडकमा गुड्न देऊ’ साँखु शालीनदी यातायात प्रालिका...
मेलबोर्न । अस्ट्रेलियाली एक पुनरावेदन अदालतले बुधबार कार्डिनल जर्ज पेलमाथिको बालयौन दुराचारको सजायलाई...
वासिङ्टन । अमेरिकी सङ्घीय जाँच ब्यूरो (एफबिआई)ले अमेरिकाको टेनेसी राज्यस्थित मेम्फिसको इसाई गिर्जाघर...
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम् जयशंकर नेपाल आइपुगेका छन् । बुधबार सवा १२ बजे त्रिभुवन...
सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा १८ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको उत्तरी तखार प्रान्तको एस्कामिस जिल्लामा सरकारी फौजले गरेको हवाई आक्रमणमा...
आज पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । साताको चौंथो दिन अर्थात बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । सुन आज तोलामा रु ३०० रुपैंयाँले...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटकको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस भव्यता र व्यापकताका...
खोटाङ । जिल्लामा एक सामाजिक बहिस्कारको घटना भएको छ । घटनाका पीडित व्यक्तिले समाजबाट बहिस्कारमा परेपछि...
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाचाैं बैठक आज अपराह्नदेखि राजधानीमा प्रारम्भ हुँदैछ । द्विपक्षीय...
सिंहदरबारमा मृत भेटिएका नायब सुब्बाको सुसाइड नोट भेटियो, के लेखिएको छ सुसाइड नोटमा ?
भक्तपुरको लोकन्थलीमा सडक भासियो, ७ घर जोखिममा
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, यी हुन् वैठकमा छलफल हुने विषय